Amafriji Okuzivikela Wokuzimela Athunyelwe phakathi kwamafu we-COVID-19-NEWS-Square Technology Group Co., Ltd.
I-self-Stacking Spiral Freezers Isuselwe phakathi kwamafu we-COVID-19
On 15th NgoJuni 2020, iloli lokugcina lamakhonteyina lisukile endaweni yalo yokugcina izimpahla, i-Square Technology ihambise ngempumelelo ama-freezer okuziqongelela amane ku-Dachan Food (eTaiwan). Amafriji amabili okuzimela ahlelelwe ukulethwa emasontweni amabili ezayo. Amafriza wokuzivikela ahanjiswa ngokwenqubo ngaphandle komthelela we-COVID-4, ngenxa yabasebenzi be-Square Technology kanye nemizamo yenkuthalo yonjiniyela.
Amafriza okuvunguza okuzenzela we-Square Technology awamukelwa kahle kuphela ngamakhasimende ase-China, kodwa futhi athandwa kakhulu kumakhasimende aphesheya kwezilwandle. I-2018-2019, amafriji wokuzivikela amaningi azifakile futhi asebenza ngokugcwele ezindaweni ezintathu zokucubungula ze-CP Foods Group eThailand, okuyi-processor enkulu yezinkukhu e-Asia. Ukudla kwe-CP kuneliseke kakhulu ngekhwalithi yemishini kufaka phakathi inhlanzeko, ukuthembeka, ukugcinwa okulula, ukusebenza kwe-HMI okusebenziseka kalula kanye nokwesekwa kwezobuchwepheshe ngesikhathi.
Kuze kube namuhla, i-Square Technology ihambise amafriza okuvunguza okuzenzela angaphezu kwama-40, asetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene, ikakhulukazi ezinkukhu, enyameni, ekudleni okulungile, njll.
Okuningi ngeDachan Group:
Ngenkathi uHo-jan Han esungula iTai-Dong Mills, iprosesa elincane lamafutha kabhontshisi namakhekhe, ngo-1957, waqala umbono oqhubeka nokuqhuba umlandeli wesimanje kaTai-Dong - iDaChan Great Wall Group.
Isikhathi esingaphezu kwengxenye yekhulu leminyaka, iDaChan Great Wall Group ilandele umbono wayo wokuphayona ngokuthembeka nokuzithoba. Leli qembu lisebenza ngezinhlelo ezihlanganiswe mpo ezinkukhu ,ungqimba,ingulube,kanye nogu lwasemanzini olulawula ngokuphelele ukuzalanisa, ukusabalalisa, ukukhiqiza okuphakelayo, ukuhlatshwa, kanye nokusebenza kokugcina. Iqembu futhi likhulisa amayunithi alo ebhizinisi kawoyela nofulawa futhi anda ngokuqinile emkhakheni we-F & B nasekuphathweni kweqiniso. Namuhla, iDaChan Great Wall Group isebenza ngamaqembu amabhizinisi ayisithupha, kufaka phakathi i-Feed & Flour Business Group, i-Agri-Meat & Egg Business Group, i-Processed Food Business Group, i-Foodservice Business Group, i-Southeast Asia Business Group ne-East Asia Business Group.
Ngokuhambisana nezinhloso zamasu ezifundazwe, iDaChan isebenza ngaphezulu kwezinsizakalo eziyi-100 ezimakethe zayo ezinkulu eTaiwan, China, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar naseCambodia.
Okwangaphambilini Phindela emuva OLANDELAYO